बलात्कार र हत्या, कम्तिमा पनि नेपाली नारी जातिको मुख्य मुद्दा बन्नु पर्छ ! – Dainiki Sarokar
बलात्कार र हत्या, कम्तिमा पनि नेपाली नारी जातिको मुख्य मुद्दा बन्नु पर्छ !
२०७७ फाल्गुन ८, शनिबार ०७:०१
काठमाडौ । जता ततै किन यस्तो घिनलाग्दो तल्लोस्तरको खवर दैनिक सुन्नमा आउँछ ? मुटु छिया छिया बनाउछ ! कारुणिक दर्दनाक मृत्‍यु ? कारण अनेक होलान तर एउटा आमा एउटा चेली एउटा जीवन ! के कारणले निमोठिन्छ ? यसको श्रोत के हो ? यस्ता अपराध गर्न के ले प्रेरित गर्छ । यि बिषयमा हामी सबै बिमर्श गरौ ! समाज यती घ्रिणित भइसक्यो कि दुधे बालक देखी असाहाय बुढी आमा सम्म बलात्कार भएका घटना छन । शरीरिक कमजोर अवस्था अशहाय् एक्लो आर्थिक बिपन्नता प्रतिरोध क्षमता र सामाजिक मान्यता दृष्‍टिकोण लगायत कारणले बलात्कार हुने गरेको तथ्यले भन्छ ।
कहिले गुरु मार्फत बिद्द्यार्थी बलात्कृत, कहिले कार्यालय प्रमुख द्वारा कर्मचारी।
धर्मगुरु पादरी मौलाना नेता सान्सद राष्ट्रप्रमुख प्रतिष्ठित पेसाकर्मी मन्दिर मस्जिद चर्च जहाँ सुकै र जहिले यस्ता घटना बारम्बार घट्ने गर्छन् ! हामीले सोच्नुपर्ने बेला भयो ।समाज कँहा जाँदै छ ? के कारणले यस्ता घटना निम्त्याइरहेछ ? यो बिषयमा समाजको हरेक तप्का जाग्नै पर्छ । यसको नेत्रित्वदायी भूमिका प्रतेक नेपाली नारिले लिने आट गर्नु पर्छ ।
मान्छेको आनीबानी, विचार, धारणा र दृष्टिकोण सबै हामीले पाइरहेका जानकारी ज्ञान र त्यसकालागी उपयोग भइ रहेका श्रोतहरु ति माथिको नियन्त्रण र सहि शिक्षाको प्रवाह् अनिवार्य छ । जस्तो पायो त्यस्तै कथा हालेर मनोरञ्जनको नाममा गरिएका कतिपय हर्कत त्यहा भित्रका कृयाकलाप र सम्बादहरुको कारण हालको बलात्कार घटना बढन मदत् पुगेको तर्फ सरोकार वालाहरुको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
साधारणतय कोही तेस्रो व्यक्ति अगाडी छ भने नाङ्गिन गाह्रो मान्ने हामीकहा मान्छेको प्रकृति हो। हाम्रो दर्शन हो तर हामीकहा देखाइने सामग्री नै उत्पिडन गर्न सिकाउने खालका छन अस्लिलता बढाउने सामग्रि हटाउनु पर्छ । हाम्रा सस्कार भित्र बिदेशी सन्स्कृतिको प्रबेशले ठुलो भूमिका खेलेको छ। प्रचार सामग्रिमा नारिको प्रयोग जुन किसिमले गरिएको छ त्यसले नारिलाई हेर्ने दृष्‍टिकोण नै गलत बन्न जान्छ बोलिने शब्द सैली त्यसमा बज्ने संगीत समेतलाइ बिचार गरी नयाँ प्रसारण् निती बन्नु पर्छ । सुरुवात आजै बाट र आँफै बाट गर्नु पर्छ । नत्र अर्को घटना सुन्न तयार भएर बसे हुन्छ ।
हामी बाहिरको नक्कल गर्न रुचाउँछौं बाहिरि संस्कृति अंगाल्नुको उपज हामी हाम्रो परिबेश् चाल चलन सन्स्कृति भेस भुसा चाड पर्ब मान्न छोडेर बिदेशी उत्तावला तडक भडक र अर्ध नग्न पहिरन लगाउन प्रेरित हुँदै छौ यसो भन्दै गर्दा प्रश्न उठन सक्छ ब्यक्तिगत इच्छा स्वतन्त्रताका कुरा आउछन तर त्यही पहिरन, त्यही रहन-सहनले नै समाज अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने हो भने, त्यहिको संस्कार पनि अंगाल्न सक्नुपर्छ। रेड लाइट एरिया बनाउनु पर्‍यो आफ्ना छोरा छोरीलाई निस्चित उमेर पछी स्वतन्त्र छोडि दिउ ! मानिसमा यौन इच्छा जाग्नु स्वाभाविक हो र त्यसको पुर्ती गर्न जसलाई हामी अपराध कर्म भन्छौ त्यता तिर मानिस जान्छ यसकालागी हामीले बिर्सदै गरेको हाम्रो पन र अंगाल्दै गरेको सन्स्कृतिको पनि भूमिका छ ।
नेपाली समाज हजारौं वर्षबाट जीवन्त चलिआएको छ। हाम्रो सात्विक खान पान सभ्य पहिरन र हाम्रो मान्यता बिभिन्न समुदायको ब्यवस्थापन निक्कै परीपक्व र बैज्ञानीक मान्यतामा आधारित्त थियो मानिसमा हुने हर्मोन यौनइच्छा जैविकी त उही नै हो। तर यसको न्यूनीकरण हुने शैलीमा डिजाइन गरिएका पोशाकहरु साडी कुर्ता दौरा र अन्य हरेक जातजातिका मौलिक कपडाहरु हुन्। अहिले ती पहिरनहरू अपनाउन छोडि सक्यौ । हामी न हाम्रो सभ्यता सन्स्कृति मा अडिग् रहन सक्यौ न छोडेर पुरै बिदेशी अपनाउन सक्यौ । यसले गर्दा हामी भित्र अपराधी मानसिकता बिकास भयो । स्वतन्त्रता को नाममा स्वच्छन्द बन्नुको परिणाम देखिदै छन ।
देशको आवश्यकता अनुसार हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने ? हाम्रो व्यबहार आचरण परम्परा र आवस्यकता भन्दा बाहिरको पाठ्यक्रम पढाएपछि नतिजा हालको समाज हो। शिक्षाको बारेमा हामीले हामीलाई धेरै पर छोडि सक्यौ । आन्तरिक, विचार, मानसिकता, शिक्षा आदिको माध्यमले समाजमा सकारात्मकता ल्याउन सके यस्ता घटनामा कमी ल्याउन मदत् पुग्छ ।
बिद्यालयमा यौन शिक्षा पढाइन्छ। तर विचार, भावना, सम्मान दर्शन मनोबिज्ञान आत्म रक्षा तथा सामाजिक परिबेश् अनुसार व्याबहारिक शिक्षाको अभाव छ । नारीको सम्मान, सहमति नैतीक शिक्षा आदि कुराहरु पढन र पढाउन छोडि सके । अहिलेका सैक्षिक सामग्रिमा नारी हस्तक्षेप अनिवार्य छ । शरीर पूर्ण रुपमा विकसित हुनलाग्ने समय किन भनियो यसको अर्थ के हो लगायत सबै बिषयको तथ्यगत र व्याबहारिक ज्ञान दिनु पर्छ । अन्धविश्वास को नाममा जीवन सँग जोडीएका बिषय छोडेर कण्डमको प्रयोग गर्न सिकाउनु लाई आधुनिक मानिन्छ मेरिस्टोभ (सुरक्षित गर्भपतन्) सेन्टर खोलिन्छ ।
आधुनिक भनी दाबी गर्ने हरुले यस बारे अध्ययन गर्ने र शिक्षा नीति बनाएर अघि बढन सके साथै विदेशीको नक्कल गर्ने गुलाम मानसिकता भएका नाफाखोर हरु माथि जनस्तर बाट प्रतिबाद गर्न सकेमा केहि परिवर्तन अवश्य हुनेछ।
शिक्षाको श्रोत अहिले इन्टरनेट बनेको छ । इन्टरनेटलाई उमेर समुह सामाग्रीको अनुगमन र त्यसको नियन्त्रणमा सरोकार वाला निकाय उदासिन् देखिन्छन । हामीकहा प्रसारण् हुने मनोरन्जन बिज्ञापन समाचार सामग्रि लगायतमा लैंगीक् हिसा तर्फ प्रेरित गर्ने खालका छन । हामीले बोल्ने शब्दमा कती छाडापन् छ त्यो सजिलै एकले अर्कोमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौ । साथी साथी बिचमा सामान्य लाग्ने तर अस्लिल् शब्द निरन्तर प्रयोग भैरहेका हुन्छन प्रतेक शब्दमा अस्लिलता प्रस्तुत गर्ने हरु पनि यस्ता घटनाका दोसी हुन । हामी बलात्कारको बिरोध गर्छौ तर आँफै यो बिषयलाई कसरी ब्यबहारमा उतार्छौ ? यो कुरामा समेत चिन्तन गर्न सुरु गरौ ।
सबै नागरिक, समाज, विद्यालय, अभिभावक, प्रशासन मिलेर नयाँ ढंगले समाजको, शिक्षाको निती बनाउनु आजको आवस्यकता हो । ब्यापक बहस को साथै सुधार को जरुरी छ यी हाम्रो दर्शन र अहिलेका बिज्ञान सम्मत अवधारणा बिच समन्वयन गरेपश्चात बल्ल नतिजा सकारात्मक आउछ ।
कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयन नहुनु सत्ता शक्ती को दुरुपयोग अपव्याख्या गरिनु पिडितलाइ सार्वजनिक हेर्ने दृष्‍टिकोण लगायत का कारण कतिपय घटना गुप चुप रहन्छन नाम किटानी सहित जाहेरी दिँदा समेत कारवाही अगाडि बढाइन्न। बहु अर्थी र व्याख्या गर्न मिल्ने कानुन लाचार प्रशासन भएको देशमा अपराधीको मनोबल बढाउने काम हुन्छ । यस्ता अपराधमा संग्लग्नलाई कठोर् सजाय र पिडितलाइ पिडक बाटै पूर्ण क्षतिपुर्ति सहित राज्यको तर्फबाट सम्मानित व्यबहार गरिनु पर्छ ।
कानुन बनाउने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने हरुका बोली तिनका व्यबहार समेतले यस्ता अपराधीको मनोबल बढाएका हुन्छन सांसद र मन्त्री जस्ताले बलात्कारीलाई मनोवल बढ्ने गरि अभिव्यक्ति दिन्छन्। कहिले सेना, कहिले प्रहरीका व्यक्ति द्वारा बलात्कार भएको खबर पनि आउँछन्। दण्ड कडा बनाउन सक्यो भने र यसको कार्यन्वयन हुनसकेमा बलात्कारी विचार आउँनासाथ झस्किने डराउने र निरुत्साहित अवश्य हुन्छ । यसो भन्दै गर्दा अपराधी मानसिकता भएका हरुको सिकार पुरुषहरु पनि हुनसक्छन । तर मानिसको समाजमा समेत पशु सरह व्यवहार र घटनाहरू घटेपछि दण्डको पनि महत्व हुन्छ ।
हाम्रो दैनिक जीवनसैली हाम्रो संगत बातावरण् खान पिन आदिले पनि यस्ता घटना हुने गरेका छन । आहार भन्नाले खाना मात्र होइन। दिमागमा हालिने विचारहरु पनि आहार नै हुन्। आँखाले देख्ने दृश्य, जिब्रोले बोल्ने वाणी, कानले सुन्ने शब्दहरु पनि आहार नै हुन्। समग्रमा भन्नु पर्दा, हाम्रो शरीरमा जे जति पनि सुचनाहरु जान्छन् ती सबै सरिरले ग्रहण गर्छ । कतिपय खानेकुराको गुण नै सेक्सुअल हर्मोन र यौनेच्छा बढाउने तत्त्व सक्रिय गर्ने हुन्छ। ती खानेकुरा कुन उमेर बाट, कुन अवस्थामा खाने र खुवाउने भन्ने चिन्तनको पनि आवश्यकता छ् । हाम्रो पुर्बिय दर्शन मा भोजन बारे शुक्ष्म अध्ययन र वर्गीकरण गरिएको छ।
यी कुराहरु सोचेर समाजमा परिवर्तन नआएसम्म यस्ता घटनाहरु दिनानुदिन बढ्ने नै अवस्थामा रहन्छन्। विचार-विमर्श, चिन्तन मनन गरौँ।
हाम्रो चेतना र व्यवहारमा परिवर्तन नआए सम्म देशमा परिवर्तन आउने छैन। नारी भित्र जन्म दिने आमा देखी बंश बढाउने जीवन साथी सम्म हुन्छन । यसरी हेर्दा यसको समाधान पनि खोज्न सकिन्छ । राज्यपक्ष उत्तरदायी हुने हो भने अहिलेकै साधनश्रोतले धेरै सुधार गर्न सकिन्छ ।’
काठमाडौं । जता ततै किन यस्तो घिनलाग्दो तल्लोस्तरको खवर दैनिक सुन्नमा आउँछ ? मुटु छिया छिया बनाउछ ! कारुणिक दर्दनाक मृत्‍यु ? कारण अनेक होलान तर एउटा आमा एउटा चेली एउटा जीवन ! के कारणले निमोठिन्छ ? यसको श्रोत के हो ? यस्ता अपराध गर्न के ले प्रेरित गर्छ । यि बिषयमा हामी सबै बिमर्श गरौ !
समाज यती घ्रिणित भइसक्यो कि दुधे बालक देखी असाहाय बुढी आमा सम्म बलात्कार भएका घटना छन । शरीरिक कमजोर अवस्था अशहाय् एक्लो आर्थिक बिपन्नता प्रतिरोध क्षमता र सामाजिक मान्यता दृष्‍टिकोण लगायत कारणले बलात्कार हुने गरेको तथ्यले भन्छ ।
उपराष्ट्रपति र सभामुख सरकारविरूद्ध लागेको ओलीकाे आराेप
मनकामनाकाे दर्शन गर्दै हेर्नुस् आजको राशिफल